अब प्रधानमन्त्री सांसदले होइन जनताले छान्न पाउनुपर्छ सहि कि गलत ? – Namaste Dainik
May 6, 2020 May 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अब प्रधानमन्त्री सांसदले होइन जनताले छान्न पाउनुपर्छ सहि कि गलत ?
सयाद जनाआन्दोलन तिर हुर्केको भएर होला । त्यो जनआन्दोलनको कोलाहल अनि त्यो बिरोधहरु धेरै मात्रामा सुन्ने गर्थे ।राजतन्त्र मुर्दावाद,लोक्तन्त्र जिन्दावाद । अनि म सोध्ने गर्थे बुवालाइ,बुवा आखिर यो सबै के को लागि गरिराको छन।”
बुवा जबाफ”त अझै सानै छ्स बुझ्दैनस यो सबै”
अनि मेरो घरी घरि को प्रस्न ले आमाको जबाफ”यो राज्तन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक नेपाल को लागि गरेको प्रायास हो । त्यो बेला कतिबुजे कति बुजेन तर आज बुझ्दै छु । त्यो आन्दोलन त एउटा राजा फालेर सयौं राजा जन्माउन लाई रहेछ । राजाले देश को बिकाश हैन आज को राजा भनौदा हरुको शासन रोखेका रहेछन ।
यहि हाम्रो देश हो जहाँ प्रधानमन्त्रीको केक अनि रास्ट्रपति सितल निबास बाट बिमानस्थल पुग्दा हेलिकप्टर चार्टर गरिन्छ तर आज नेपाली भोक्भोकै चिउरा चाउचाउ को भरमा खुट्टामा चप्पल पड्काउदै १०/१२ दिन हिडेर घर पुग्नु परेको छ ।
के यहि हो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल?
सत्र हजार नेपालिले ज्यानको बलिदान जनाआन्दोलनमा आखिर यहि को लागि दिएका हुन?
सत्र हजारको लास माथी टेकेर गरेको यो फोहोरी राजनिती आखिर कहिले सम्म नेकपा सरकार?
भयो अब अति भयो जनताको ब`लिदान रग`त पसिना माथी रजाइ गर्ने तिमिहरुलाइ छुट छैन । आज तिनै परिवार हो हिजो देश का लागि बलिदान दिय आज तिनै कोइ मन्त्री बने कोइ आज एक छाक खान नपाएर भोकभोकै म`र्दै छन ।तर ती नेता भनाउदाहरु देशको सासनसत्तालाई हातमा राखेर राजनितिको आडमा दादागिरी,ज्यादती अनि भ्रष्टचार । आखिर यहि हो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको तिमिहरुले परिकल्पना गरेको समाजबाद ।
अब प्रधानमन्त्री सांसदले होइन जनताले छान्नपाउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ। मेरो बिचारमा देश्को मुहार फेर्नु छ भने भ्रष्टाचारि लाइ नाङ्गो पारेर आगो लगाउन सक्ने,साहासी,निडर लाई प्रधानमन्त्री बनाउन जरुरी छ।